Macdanta King Sulaymaan (qaybta 15), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Macdanta Boqor Sulaymaan <abbr> (qaybta 15)
Maahmaahyadii 18,10 waxay leedahay: “Magaca Rabbiga waa qalcad adag, Kan xaqa ahu wuu cararaa oo waa la gaashaamaa. Micnaheedu maxay tahay? Sidee magaca Ilaah u noqon karaa qalcad adag? Muxuu Sulaymaan u qori waayey in Ilaah qudhiisu qalcad yahay? Sideen ugu dhex socon karnaa magaca Allah oo aan ka helnaa difaac?
Magacyadu waa muhiim bulsho kasta. Magaca ayaa wax badan ka sheegaya qofka: jinsiga, asalka qowmiyadda iyo laga yaabee sidoo kale booska siyaasadeed ee waalidiinta ama sanamyadooda caanka ah waqtiga uu ilmuhu dhashey. Dadka qaar waxay leeyihiin naaneys oo iyaguna sheegaya wax ku saabsan qofkan - cidda iyo waxa qofkaasi yahay. Dadka ku noolaa bariga qadiimka ah, magaca qofka wuxuu lahaa ahmiyad gaar ah; Yuhuuddu sidoo kale waa la mid. Waalidku waxbadan bay ka fekereen magaca canugooda waxayna ku baryeen rajada in ilmahoodu fuliyo waxa magaciisa ku dhawaaqo Magacyada sidoo kale Ilaah waa u muhiim. Waan ognahay in mararka qaar uu beddelo magaca qofka marka uu / ay yeelato waayo-aragnimooyin nololeed beddelaya. Magacyada Cibraaniga badiyaa waxay ahaayeen tilmaamo gaagaaban oo qofka ka mid ah, taas oo ku tusaysa qofkaasi inuu yahay ama noqon doono Tusaale ahaan, magaca Aabraam wuxuu noqday Ibraahim (Aabaha dad aad u badan) si uu u dhihi karo inuu yahay aabbe dad badan Ilaahna isaga ku shaqeeya.
Qayb ka mid ah dabeecadda Ilaah
Ilaah sidoo kale wuxuu adeegsadaa magacyada Cibraaniga si uu isku sharaxo. Mid kasta oo ka mid ah magacyadiisu waa sharraxaadda qayb ka mid ah dabeecaddeeda iyo aqoonsigeeda. Waxay tilmaamayaan cidda uu yahay, wixii uu qabtay iyo isla waqtigaasna waa ballanqaad annaga noo ah. Tusaale ahaan, mid ka mid ah magacyada Eebbe Shalom micnaheedu waa "Rabbigu waa nabad" (Richter [space]] 6,24). Isagu waa Ilaaha nabada ina keena. Ma baqaysaa? Miyaad xasilloon tahay ama murugeysan tahay? Markaa waxaad dareemi kartaa nabad maxaa yeelay Eebbe qudhiisu waa nabad. Marka amiirka nabaddu kugu dhex jiro (Ishacyaah 9,6; Efesos 2,14), Isagaa kuu caawin doona. Waxay badashaa dadka, waxay yareysaa xiisadda, waxay beddeshaa duruufaha adag waxayna dejisaa dareenkaaga iyo fikirkaaga.
Bilowgii 1:22,14 Ilaah wuxuu ugu yeeraa Yehowa Jireh “Rabbigu waa arkaa”. Waad u imaan kartaa Ilaah oo aad ku tiirsataa isaga. Siyaabo badan, Ilaah wuxuu doonayaa inaad ogaato inuu yaqaan baahiyadaada oo uu jeclaan lahaa inaad la kulanto iyaga. Kaliya waa inaad isaga weydiisataa taas. Ku noqo Maahmaahyadii 18,10: Sulaymaan wuxuu yiri wax kasta oo lagu sheego Ilaah oo ku saabsan magacyadiisa - nabadgiisa, aaminnimadiisa weligeed ah, nimcadiisa, jacaylkiisa - waa annaga oo xoog leh. Qalcado ayaa la dhisay kumanaan sanadood si dadka deegaanka looga ilaaliyo cadaawayaashooda. Darbiyada aad bay u badnaayeen oo ku dhowaad la arki karin. Markii kooxdii soo weerartay ay soo weerareen dalka, dadku waxay ka carareen tuulooyinkoodii iyo beerihii ay u galeen qalcadda maxaa yeelay waxay ogaayeen inay nabad qabaan oo ay nabad qabaan. Sulaymaan wuxuu qoraa in kuwa xaqa ahu Ilaah u cararaan. Iyagu ma ay tegin socdaal firaaqe ah halkaas, laakiin waqti kuma lumin oo Ilaah bay u ordeen oo way nabad galeen isaga. Gaashaaman macnaheedu waa ka ilaalin iyo ka badbaado weerarada.
Si kastaba ha noqotee, mid ayaa ku doodi kara in tani ay qusayso kaliya "dadka". Markaa fikradaha sida "Anigu kuma fiicna. Anigu quduus ma ahi. Waxaan sameeyaa qaladaad badan. Fikirradaydu waa daahirsanaanta ... "Laakiin magac kale oo Ilaah loo bixiyo ayaa ah Rabbiga Tsidekenu" (Yeremyaah 33,16). Ilaah wuxuu ina siiyaa xaqnimadiisa xagga Ciise Masiix oo u dhintay dembiyadeenna "si aan u noqonno kuwa Ilaah hortiis xaq ku noqday" (2 Korintos 5,21). Sidaa darteed uma baahnin inaan ku dadaalno caddaalad annaga keliya, maxaa yeelay waxaan xaq ku leenahay allabarikii Ciise haddii aan sheegno annaga qudheenna. Taasi waa sababta aad ugu kicin karto si geesinimo leh wakhtiyada aan la hubin iyo cabsida leh, xitaa haddii aadan dareemaynin inaad caddaalad tahay.
Wadajirka beenta ah
Waxaan sameyn karnaa khalad naxdin leh markaan u orno meel qaldan anagoo raadsanna amniga. Aayadda soo socota ee Maahmaahda ayaa noo digaysa: "Ninka taajiriinta ahi waa sida magaalo adag oo wuxuu moodayaa inuu leeyahay derbi dhaadheer." Tani ma qusayso oo keliya lacagta, laakiin wax walba oo sida muuqata naga caawineysa inaan yareyno walwalkeena, cabsida iyo walaaca maalin kasta: khamriga, daroogada, shaqada, qof gaar ah. Sulaymaan wuxuu muujiyay - oo waayo aragnimadiisa ayuu si fiican u yaqaan - in waxyaalahan oo dhan ay bixiyaan nabadgelyo been ah. Wax kasta oo aan ka ahayn Eebbe oo aan u rajeynayno nabadgelyo ma awoodi doono inuu na siiyo waxa aan dhab ahaan u baahan nahay. Magaciisa waa aabe jacaylkiisuna waa mid aan xad lahayn oo shuruud la’aan ah. Waxaad la yeelan kartaa xiriir shaqsiyeed iyo kalgaceyl leh. Markaad soo maray wakhtiyo adag, u wac isaga si hubaal ah inuu kugu hagi doono “magiciisa awgii” (Sabuurradii 23,3). Weydiiso inuu ku baro inuu fahmo cidda uu yahay.
Sannado badan kahor, markii carruurteyda aad u yaraayeen, waxaa jiray duufaano aad u weyn habeenkii. Hillaac ayaa ku dhacay agagaarka gurigeenna si aan koronto u dhammaynno. Caruurtu way argagaxeen. Markii ay hillaaca hillaaca hareerahooda ku dhufanayeen markii mugdiga iyo onkodku qaylinayay, ayay na soo waceen oo aad noogu soo ordeen sida ugu dhakhsaha badan oo ay kari karaan. Annaga oo ah qoys ahaan waxaan ku wada seexaney sariirta guurka markaan aniga iyo xaaskeyga aan caruurteenna si adag gacmaha ugu qabanno. Si dhakhso ah ayey u seexdeen, iyagoo aamminsan in waxkasta hagaagi doonaan maxaa yeelay hooyadood iyo aabbahayba sariirta bay ku jireen.
Si kastoo aad tahayba, waxaad ku nasan kartaa Ilaah kuna kalsoonaataa inuu kula jiro oo gacantiisa kugu hayo. Ilaah waxaa lagu magacaabi jiray Shaamaah (Yexesqeel 48,35) oo micnaheedu yahay "Waa kan Sayidku". Ma jiro meel uusan Ilaah kula jirin. Waxay joogtay waagii hore, waxay ku jirtaa jiritaankaaga waxayna noqon doontaa mustaqbalkaaga. Wuu kula jiraa adiga waqtiyada wanaagsan iyo kan xunba. Had iyo jeer isagu dhinac buu kuu yahay. U orda magiciisa awgood.
Waxaa qoray Gordon Green
Macdanta Boqor Sulaymaan (Qaybta 15aad)